A3 T Shirt Printer DX5 Musoro China Manufacturer
Tsanangudzo:T Shirt Printer DX5 Musoro,Portable Flatbed T Shirt Printer,Cotton T Shirt Printer
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > A3 T Shirt Printer DX5 Musoro
A3 T Shirt Printer DX5 Musoro
Muenzaniso Nha.: RF-A3 T180710
Inobereka mifananidzo yakanakisisa yemhando pamhando dzakawanda dzenguvo, kunyanya 100% cotton uye yakakwirira-kamba yakakonzera t-shirts. Uyewo isiri-chips ink system inogona kukubvumira kuti udzoze inki usina kutenga makiradhiji ekutanga. Iyi A3 T Shirt Printer DX5 Musoro inouya nemisara 6 CMYKWW, ine mabhodhoro mashanu inki. ITh Shirt Printer DX5 Musoro unotora technikiti yeDiPiezo digital, iyo inyanzvi yemapirita anotengeswa seTshirt printer yakaitwa nedhijithali. Icho chiri chakanaka chisarudzo chakanaka kumunhu wepamusoro wevatengi kana kiosk uchishandisa. Iyi Portable Flatbed T Shirt Printer yakagadzirwa kubva kuEpson inotapura musoro musoro uye mukuru webhodi, inogona kuwana max. kudhindwa nokukurumidza neA4 / 100s, 6 mhando yemuenzaniso, saka unogona kudhindwa panguvo yakasviba ne CMYK + WW kuti uwane bhenekeri yakanaka yeinki.
Kuenzaniswa nemitambo yekudhinda yemichina, RFC digital flatbed printer inobatsira kuti uchengetedze kubudiswa kwechinyorwa, kupfidza kwekushisa kupisa uye dzimwe tsika dzakawanda dzekuita mapepa, inoputsa kuburikidza nekuderedza kwemaitiro emhando yekasi, ino inyanzvi inogadzira kushandiswa kwemichina, kuderedza mari yekushanda , kushandiswa kwemari yakaderera, kukwidziridzwa kwepamusoro, kusaderera kwepamusoro, kukwidziridzwa kwepamusoro kwakagadzirwa zvechokwadi! Iyo inogona kubuda muvara wemufananidzo wechinhu pane zvinhu zvose, zvinotapira, zvisingagadziri, zvisingaregi, zvisingaiti kubata, rusununguko rwemavara, rumwe rudimbu rwekupindira uye zvimwe zviitiko kuti kukurumidze kushandiswa kwedhijidhi mubhizimusi rokudhinda, kukura kwekugadzirwa kwakakwana uye 100% mushure mekutengesa basa.
RFC inomiririra pane mafungiro ekuzvibata zvakanaka usati waita chinhu, kuomerera kumitemo mitatu ye "kutendeseka kutanga, mutengi kutanga uye kushingaira", inopa zvinhu zvakanakisisa uye zvakagadzirwa zvakanaka uye mazano kune shamwari kubva kumabhizimisi ose. Gamuchirai noushamwari mose kuti mushanyire fekitari yedu!
A4 guru macaron printer Bata Ikozvino
"colorful candy printer" A4 Bata Ikozvino
cookie photo printer A4 Bata Ikozvino
Tungamira kune Wood Printer Games Bata Ikozvino
T Shirt Printer DX5 Musoro Portable Flatbed T Shirt Printer Cotton T Shirt Printer T Shirt Printer A3 T Shirt Printer KwaKotoni 3 T Shirt Printer A2 T Shirt Printer T Shirt Printer Price Pictures